Maxaa Laga Filan karaa Dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada sare u dirtay? | Baidoa24.com
Home WORLD NEWS Maxaa Laga Filan karaa Dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada sare u dirtay?
Maxaa Laga Filan karaa Dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada sare u dirtay?
Previous articleTaliska Ciidanka Amisom ee Dalka Uganda oo Taliye cusub u soo magacowday Ciidankeeda Soomaaliya.
Next articleIsraa’iil oo loo haysto “dambiyo dagaal” oo ay ka geysatay dhulka Falastiiniyiinta